Dhismayaal bili doona bilicda Kismaayo oo la daahfuray (Sawiro) | dhanaanmedia.com
Dhismayaal bili doona bilicda Kismaayo oo la daahfuray (Sawiro)
February 20, 2019 // DM6 DM6 // News2423 Views
Xarumahan oo loo dhisay hab casri ah ayaa isugu jira dhisme ka kooban ilaa sedex dabaq iyo xarun kale oo loogu talo galay dhalinyarada oo ka kooban xafiisyo, garoomo iyo goobo kale oo nasasho ah ayaa laga daahfuray magaalada Kismaayo, ayadoo xarumahan loo dhisay hab casri ah oo ka duwan guryihiin hore looga dhisi jiray Kismaayo.
Naqshadda loo dhisay xarumahan oo ah mid ku cusub Kismaayo ayaa waxaa hirgeliyay shirkad Soomaali leedahay, waxaana maalgeliyay sanduuqa xasilinta Soomaaliya ee SSF.
Madaxweynaha Jubbaland Mudane Axme’d Max’ed Islaam iyo Ku xigeenkiisa ayaa daahfuray xarumahan.Kadib Daahfurka Xarunta ayuu Madaxweynaha Jubbaland Mudane Aqalka Martida ee Magaalada Kismaayo ku marti qaaday Shirkadaha iyo dhamaan Dhinacyada kala duwan ee ka qayb qaatay dhismaha Xarumahan.Waxaa sidoo kale kulanka ka qayb galay Madaxweyne ku xigeenka labaad Mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud iyo qaar kamid ah Wasaaradaha dhawaan Xaruntan u guuraya.
Madaxweynaha oo Khudbad halkaas ka jeediyay kadib qado sharaf uu u sameeyay Masuuliyiinta kala duwan waxaa uu sheegay in ay tahay wax loo baahna in shirkadaha iyo Hay’adaha caalamiga ah ay ku dhiiran karaan in dib u dhiska dalka ay ka qayb qaatan gaar ahaan Xarumaha danta guud isagoo u mahad celiyay dhamaan Shirkadaha dhismaha Xaruntan ka qayb qaatay.
Waxaa kale oo Madaxweynahu uu sheegay in uu rajaynayo in maalgalinta Bulshada caalamka ay halkeeda kasii socon doonto oo wax badan soomaalida lagu aamini doono isagoo xusay in hantida loogu tala galay dhismaha dalka ay tahay in laga ilaaliyo musuq iyo is daba marin taas oo khalkhal galin karta shaqada.
Madaxweynahu wuxuu intaas ku daray in la dhisi doono dhamaan Xarumaha iyo goobaha Bulshada loogu adeego iyadoo loo kala hormarinayo sida baahiyahu ay u jiraan ee ay tahay tabarta Dowladu wuxuu sheegay in qaar badan oo kamid ah dhismayaasha Dowlada aanay cidina ka caawin Jubbaland oo ay guntiga dhiisha isaga dhigeen sidii loo heli lahaa Xarumo lagu shaqeeyo.
Mashaariicda la fulinayo ayuu xusay Madaxweynahu in ay noqdaan kuwo la hubiyay oo ka banaan dib u dhac iyo tuhun si aanay mashariicdu mar walba dib ugu dhicin isagoo sheegay in amni ahaan Jubbaland ay aad usoo kabanaysay sanadahii lasoo dhaafay wixii dhimana dib u habayn lagu samayn doono.
Madaxweynaha ayaa ugu danbayn shaahaadooyin gudoonsiiyay Shirkadaha iyo Hay’adahii ka qayb galay dhismaha xarumahan.